Tag: otu ụlọ
Ịgụ Oge: 2 nkeji Adabala m n'omume jọgburu onwe ya nke itinye ụfọdụ ozi ịntanetị iche maka ihe maka otu ọnwa ma ọ bụ karịa. Enwere m usoro ntanetị maka ozi ịntanetị na-abata. Ọ bụrụ na ha achọghị ka anya ma ọ bụ mee ihe ozugbo n'ime oge iji zere ụdị ihe mgbu ụfọdụ, ana m ahapụ ha ka ha nọrọ. Ikekwe nke ahụ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụghị. Isiokwu a nile mere ka mụ na otu enyi m na-atụgharị uche (onye e chere na “oge nchere” m)
Ịgụ Oge: <1 nkeji Kedu mgbe oge ikpeazụ ị ghagharịrị ihe omume email gị iji hụ na e depụtara ndepụta email gị nke ọma na ndị debanyere aha na-enweta ozi ha chọrọ? Ya mere, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-acria ntị naanị na nnukwu ndị debanyere aha… obere ndepụta email na ọdịnaya ezubere iche mgbe niile karịa mgbasa ozi mgbasa ozi. Nke a bụ ozi mmezi zuru oke, natara site na WebTrends: A na-ekewapụta isiokwu ndị ahụ nke ọma ma na-emelite ihe m chọrọ naanị otu pịa. Ọ bụrụ n’ịnwere ike ijide mmasị ndị debanyere aha
Ịgụ Oge: <1 nkeji Nzaghachi akpaaka ezubere iche nke m chọrọ ka m hapụ maka itinye aka na ntinye aka niile m na-enweta site na email, netwọkụ mmekọrịta na micro-blọọgụ: Amaghị m gị. Kpọrọ. Gịnị mere i ji agwa m okwu? Kedu ka ịchọtara m? Enwere m gị ikike m? Agwara m gị na m nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị? Na-agwa m okwu n'ihi na ị kwesịrị ịgwa m? Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe nwere ike ịba uru? You maara n'ezie onye
Ịgụ Oge: 2 nkeji Mụbaa nsonaazụ Email gị nke ọma ma rụọ ọrụ nke ọma na MarketingSherpa's 2009 Email Marketing Bechmark Guide. Ndị ọchụnta ego na-achọ ụzọ dị oke ọnụ iji wee bulie mmetụta ma wulite mmekọrịta n'ihe nwere ike ịbụ ihe siri ike na akụnụba ụwa. Email na-aga n'ihu na-abụ otu n'ime ụzọ ndị a na-ejikarị emegbu na ndị ahịa na-atụgharị iji soro ndị ahịa ha kwurịta okwu. Mana naanị otu ụzọ iji bulie arụmọrụ email gị bụ ịzụ ahịa n'ụzọ dị irè na n'ụzọ dị irè.
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ha wuru Barnes na ndi a ma ama n’ime kilomita ole na ole nke ụlọ m ma ọ bụ n’ezie ụlọ ahịa mara mma. O yiri ka ọ na-esiri m ike ịchọta akwụkwọ m ebe ahụ. Ala dị ka ụzọ nwere oke ngwụcha iji hazie shelf ha. Ka o sina dị, enwere m obi ụtọ n'ụlọ ahịa abụọ mana ahụrụ m onwe m na Barnes na ndị a ma ama n'ihi na ha nwere Starbucks nke nwere Ikuku na AT&T. Agabeghi